Noobie မှ Wii ကိုရယူပါ။ | Martech Zone
Noobie မှ Wii ကိုရယူပါ။
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 13, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်သောပက်ထရိ… Mr.Nobobie သည် Nintendo Wii ကိုပေးနေသည်။ Patric သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကော်ဖီတစ်ခွက်များစွာသောက်ခဲ့ဖူးသည် အဆိုပါ Bean ကိုဖလား.
ငါနောက်ဆုံးပေါ် gadget သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအကြောင်းကိုရအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားသကဲ့သို့, ငါ့ site ကိုသွားရောက်သောရှေးရှေး၏ကောင်းတစ် ဦး အဘို့ကိုငါပြောနေတာအဘယျသို့သဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရဖို့ငါကအရေးကြီးတယ်။ Mr. Noobie လာတဲ့နေရာပဲ။ သင်သည် TiVo၊ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်တယ်လီဖုန်းကိုနားလည်ရန်ပြissuesနာများရှိပါက Mr.Nobobie က၎င်းနှင့်ပတ်သက်သော Podcast တခုကိုရေးသားခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေသူပါ။
Patric ရဲ့ Giveaway မြှင့်တင်ရန်ကူညီပါ
Patric ကသူက Wii လွှတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတော့ငါက blog အကြောင်းပြောချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ အပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်, ငါ့အဘို့မက်လုံးလည်းရှိပါတယ်! Mr. Noobie သည် iPod Nano နှင့် iPod Shuffle တို့ကိုလည်းပေးနေသည်။
အကယ်၍ သင်၏ဆိုက်မှစာရင်းသွင်းသူအများဆုံးရရှိလျှင်သင်သည် 8GB iPod Nano ကိုရရှိသည်။
အကယ်၍ Nintendo Wii ကိုအနိုင်ရသူသည်သင်၏ site မှလာလျှင် 1GB iPod Shuffle ကိုသင်ရရှိသည်။
Noobie သည်သင်၏နည်းပညာပညာရေး ဦး တည်ရာဖြစ်သည်။ သင်ကနောက်ဆုံးပေါ် gadget ထဲမှအကောင်းဆုံးကိုရယူချင်သည်ဖြစ်စေ၊ သင့်အတွက်နည်းပညာကိုလုပ်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုသင်ယူလိုသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ Noobie သည်လုံခြုံပြီးနားလည်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုတက်ရောက်ပါတစ် ဦး ဖတ်ပါ ဆောင်းပါး, browse ဘလော့ဂ်, ဒါမှမဟုတ်နည်းပြ session တစ်ခုအချိန်စာရင်း။
ဟုတ်ပါတယ် Wii ကိုလိုချင်တဲ့သူဘယ်သူမဆိုအနိုင်ရဖို့ဝင်သင့်တယ်။ ထို့အပြင်စိန်ခေါ်မှုအနည်းငယ်ရှိသောသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များအား Noobie တွင်ထိုစကားလုံးကိုထုတ်ယူရန်သေချာပါစေ။ မင်းရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာလူတွေများနေရင်တောင် Patric က site နည်းပြဆရာကိုလုပ်နိုင်တယ်။ သူဟာနောက်လိုက်ကြီးတွေရှိပြီးကြီးမားတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်အစားကြောက်စိတ်ကိုရှောင်ရှားချင်တဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့ကူညီပေးဖို့ပိုကြီးတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။
Noobie မှ Nintendo Wii ကိုအနိုင်ရရန်သင်၏အခွင့်အရေးအတွက်ယခုထည့်ပါ။
Tags: အလိုအလျောက်မှတဆင့်နှိပ်လိုက်ပါကလစ်တစ်ချက်၏အရေးကြီးမှုမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက်လစာအကြိုက်ပေးဆောင် retweetsပေးဆောင်ဝေမျှပေးဆောင်အမြင်များအရင်းအမြစ်လုံခြုံတဲ့စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်shopifyခွေးရူးစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ကဗျာဝက်ဘ်ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှု